Maxaad u baahan tahay a ilaalinta motor circuit mawjadaha MPCB
Waa maxay: motor magnetic mawjadaha circuit mawjadaha circuit Kuwani warshad ka wareeggeedii gaaban gudahood xadka awoodda breaking iyo taasi oo ka kiciya magnetic (mid per wajiga) ilaaliyo. breaking circuit magnetic waa dhan-cirif bilowgaba: mid kiciya magnetic isku mar doonaa ...
Farqiga of contactors
NEMA VS IEC: sida u fiican?
Sida maxaa yeelay contactors badan oo kala duwan korontada iyo straters in la doorto, waxaa laga yaabaa inaad cajiib ah oo ku saabsan faa'iidada iyo khasaaraha ee IEC vs qalabka NEMA qiimeeyo. Ha awood Nofuel aad sharax ku saabsan labada hay'adood heerarka kala duwan kuwaas oo mid ka mid ah ku haboon laga yaabaa in codsigaaga loogu talagalay fiican! Waa maxay NEMA ...
HVAC & R xal gacanta mashiinka
hababka la isku halayn karo, tamarta-hufan HVAC & R * qiimo, qaybaha aadka loo rabo in design, dhismaha, iyo howlgalka dhismayaasha warshadaha iyo ganacsiga - iyo bixinta raaxada si mug leh si dadka ay. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in Original Qalabka Man ...
Sidee in ay doortaan Relay dollar kaamerada, dejinta iyo hagaajinta
Relays dollar kaamerada ku jira hindisooyin ilaaliya loo isticmaalo ilaalinta dollar of matoorrada korontada, contactors ama qalabka kale ee korontada iyo wareeggeedii korontada. In hawlgalka dhabta ah ee motor ah, sida jiidayeen Mashiinka wax soo saarka si ay uga shaqeeyaan, haddii mishiinka waa caadi ahayn ama wareeg waa ab ...
Sida loo Xulashada Ghadafi breaker
Sida loo xusho CONTACTOR AN IEC
1.What waa Contactor IEC ah? IEC Contactor waa nooc ka mid ah qalab si toos ah xidhiidh kaas oo isticmaala howlgalka bir electromagnetic sida uu signal u aqbasho shisheeye, oo si joogta ah isku xira ama disconnects ee AC, DC circuit ugu weyn oo ballaadhan circuit gacanta awoodda. Inta badan loo isticmaalo controllin ...